Gen Cali Gaab oo ka badbaaday qarax lala eegtay gaarigiisa. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Gen Cali Gaab oo ka badbaaday qarax lala eegtay gaarigiisa.
May 20, 2020 admin759
Qaraxa ayaa gaariga lagula eegtay agagaarka Isgoyska Banaadir, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac sida saraakiisha Amaanka Soomaaliya u xaqiijiyeen Mustaqbal.
“Qaraxa waxaa ku dhintay hal askari oo gaariga ka saarnaa dusha sare askarta gudaha ku jirtay dhaawac ayaa gaaray” sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Qaraxyada miino ee muddooyinkan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa isa soo tarayay, waxaana lala beegsanayay gaadiidka ay la socdaan Ciidamada amaanka Dowladda Faderaalka Soomaaliya.
Ahlu Sunno oo ka hadashay Doorashada Madaxweynaha Galmudug